Annaga - Beijing Multifit Electric Technoloty Co., Ltd.
Shirkadda BEIJING MULTIFIT ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD. waa warshad-farsamo sare oo ka go'an in ay cilmi-baarista iyo horumarinta, wax soo saarka, iibinta iyo dhismaha dhirta tamarta photovoltaic tamarta qoraxda iyo tamarta kale cagaaran, Xarunteedu tahay Beijing, saldhigga wax soo saarka waxa uu ku yaalaa Guangdong Shantou High-tech Development Zone.
Waxaan diirada saareynaa horumarinta tignoolajiyada, wax soo saarka, iibinta iyo is dhexgalka nidaamka ee aaladaha nadiifinta aaladaha qoraxda, sahayda korantada, nidaamyada iftiinka wadada LED-ka iyo alaabooyinka taageeraya, Naqshadeynta, horumarinta, maalgashiga, dhismaha, hawlgalka iyo dayactirka mashaariicda nidaamka tamarta qoraxda iyo mashaariicda iswada korontada.
Multifit waxaa la aasaasay 2009, Iyada oo ku saleysan bixinta heerka caalamiga ah ee cabbirka yar-yar ee dhirta korontada ee xalalka rayidka ah iyo cilmi baaris cusub iyo horumarinta alaabta korontada ee tamarta la cusboonaysiin karo, waxaan soo saarnay koox iib ah iyo kooxaha R&D oo leh fikrado, khibrad iyo tignoolajiyada. Badeecadu waxay heshay in ka badan shahaadooyinka patent 10. Our alaabta waxaa ansixiyay iibsadayaasha kala duwan oo ku raaxaysan sumcad wanaagsan dhexdooda. Hadda waxaa loo dhoofiyay Yurub, America, Asia, Africa iyo Latin America iyo kuwa kale, waxaa jira in ka badan 50. wadamada iyo gobolada aduunka.Weligay ma joogsanayno inaan isku dayno intii karaankeena ah inaan Talaabo Buur teknoloji oo tamarta koronto ah oo kor u qaadeysa qanacsanaanta macaamiisha iyo wacyiga.
Future, Multifit waxaa ka go'an in ay horumariyaan warshadaha tamarta la cusboonaysiin karo, iyo sii wadaan si ay u horumariyaan wax ku ool ah oo kharash-ool ah xal qoraxda si loo keeno cagaaran iyo koronto badan nolosheena.Sida ku saleysan warshadaha photovoltaic ah, ku dadaal in la dhiso shirkadda galay ixtiraam marka hore- shirkad sawir qaade fasalka.
Himilada: Waxtarka sare iyo badbaadinta tamarta, u ogolow dad badan inay ku raaxaystaan ​​tamarta cagaaran.
Qiimaha: adag iyo diiradda, isgaarsiinta iyo iskaashiga, mas'uuliyadda iyo daacadnimada, dadaal iyo hal-abuurnimo
Aragtida: Diirada saar tignoolajiyada beddelka ee madaniga iyo ganacsiga iyo xalka caqliga leh. wuxuu sii wadaa inuu horumariyo xalalka cadceedda oo hufan oo kharash-ku-ool ah si loo keeno koronto badan oo cagaaran nolosheena.
Halkudhig: Ku raaxayso shaqada.
Shirkaddayadu waxay ku dheggan tahay hadafka horumarinta ee "badbaadinta tamarta hufan, dad badan ha ku raaxaystaan ​​tamarta cagaaran", oo ku salaysan warshadaha photovoltaic, oo ay ku dadaalaan in ay dhisaan shirkadda si ay u noqoto mid la ixtiraamo heerka koowaad ee ganacsiga tamarta photovoltaic.
Iyadoo la raacayo fikradda ah "guusha shaqaale kastaa waa guusha shirkadda", shirkaddu waxay u aragtaa shaqaalaha inay yihiin ilaha ugu muhiimsan iyo hantida ugu qiimaha badan ee shirkadda, waxay siisaa shaqaalaha faa'iidooyinka tartan ee mushaharka, faa'iidooyinka daryeelka iyo waxbarashada. iyo fursadaha tababarka, kuna dadaal in aad abuurto jawi korriin tayo wanaagsan leh, si ay shirkadu u noqoto meel karti, karti, karti, karti leh. Waxaan si adag u aaminsanahay in shirkadu u baahan tahay in ay leeyihiin jawi dhaqanka shirkadaha aqoonsan by dhammaan shaqaalaha, istaraatijiyad cad cad shirkadda, gool horumarinta cad, dabacsanaan iyo jawi shaqo, abaal-marin iyo ciqaabo nidaamka shaqada cad, taas oo si buuxda u kicin kara awoodda ugu badan ee shaqaalaha, si gaadhaan guulo laba-jibbaaran oo shaqsiyeed iyo mid shirkadeed.